CMO votoaty > Marry Copper Marketing & Advertising
Nahazo mari-pahaizana avy amin'ny Departemantan'ny chimique organika, ny Oniversiten'i Stanford, ny Departemantan'ny simia sy simia, mihoatra ny taona 15 tany amin'ny sehatry ny synthetic organiques simika, dia nanompo ny Pfizer Inc, tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ara-barotra ny tsena iraisam-pirenena ary nanao fahombiazana mahatalanjona.
1 nieritreritra ao amin'ny "Marry Copper Marketing & Advertising"
10 / 22 / 2019 ao amin'ny 1: 48 AM
Manana pejy mifandray amin'ny pejinao ve ny bilaoginao? Sahirana mikaroka azy aho
fa, te hitifitra anao mailaka aho. Nanana hevitra sasantsasany ho an'ny bilaoginao mety hahaliana anao aho raha henoina.
Na izany na tsy izany, tranokala lehibe ary tsy andriko izay hahitana
manatsara rehefa mandeha ny fotoana.
Manaraka Next post: Alex Rodriges